पाँचथर । देशैभरी अधिकांश प्रदेशका स्थानिय तहमा महिला उपप्रमुख छन् । कुल ७५३ पालीका मध्येमा १८ पालीकामा मात्र महिला नेतृत्व छन् । संसदीय तथा स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा गाँउ–सहरमा चुनावी माहोल बढ्दै गएको देखिन्छ । बिभिन्न पार्टीले त आफ्ना चुनावी नारा नै अगाडी ल्याई सके । संविधानले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरे पनि अधिकांश पालिकामा उपप्रमुख महिला बने । उपप्रमुख महिलाका लागि कोटा जस्तै बनाइयो । स्थानिय निर्वाचनको तिथि नजिकीदै गर्दा पुरुष वर्गमा अबको निर्वाचनमा महिलालाई कहाँ राख्ने भन्ने छलफल सुरुभएको छ भने उप प्रमुख पद निभाइसकेकालाई अब नेतृत्वमा जाने नै हामी हौ भन्ने लाग्न थालेको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकीदै गर्दा ५बर्ष सम्म उप प्रमुख पदमा रहेर महिलाले नेतृत्व सम्हाली सकेका छन् ।
पाँचथर जिल्लाको याङवरका गाँउपालिका जिल्लाको सुदुर पुर्वि–उत्तर गाँउपालिका हो । साविक छवटा गाविसलाई मिलाएर गाँउपालिका निर्माण भएको हो । जसको सिमाना छिमेकी मूलकु भारतसँग समेत जोडिन पुग्दछ । नजिकिदै गरेको निर्वाचनलाई मध्य नजर गदैं याङवरक गाँउपालीकाकी उपप्रमुख कमला कुमारी योङहाङलाई अबको तयारी के छ भन्ने बिषयमा केन्जो खबरले गरेको कुराकानी –:
उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए पछि तपाँइले याङवरक गाउँपालिकामा के के काम गर्नु भयो ?
२०७४ सालमा उपाध्यक्ष पद सम्हालेपछी यी पाँच बर्ष भित्रमा याङ्वरक गाउँपालिकाले निकै धेरै काम गरेको छ। भौतिक पुर्वधार देखि लिएर सामाजिक बिकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वडा भवन देखि याङ्वारक गाउँपालिकाको भवन बनाउने काम गरौं । १५ सय शैयाको अस्पतालको शुरूवात गरौं । त्यस्तै बिद्यालयको भवनको समस्या समाधान गर्न देखि सडकको संजाल सबै वडामा पुर्याउने काम भयो। त्यो भन्दा पनि याङवरक गाउँपालिकाले बित्तिय सुशासनको क्षेत्रमा एकदमै होशियारपूर्वक काम गरेकै कारण पाँचथर जिल्ला कै पहिलो हुन सकियो । यो अवधिमा महत्वपूर्ण काम गरेका छौ अझै महत्वपूर्ण काम गर्न बाकी छ ।
अध्यक्ष र पार्टिबाट कस्तो सहयोग पाउनु भयो ?
अरु साथिहरुले धेरै गुनासो गर्नु हुन्छ, तर मेरो हकमा त्यस्तो भएन, अध्यक्षको सहयोग भरपुर रह्यो । मैले काम गर्दा होस या वहाँले हामिले एक अर्कालाई सोधेरै काम गर्ने वातावरण बन्यो । रह्यो पार्टिको कुरा पार्टिको सहयोग बिना उपाध्यक्ष हुन संभावना थिएन, अझ भनौ पार्टिको समन्वय रहिरहेको छ ।
समस्या सबै तिर हुन्छ । व्यक्तिगत समस्या भएन तर जब लैङ्िगकताको कुरा उढ्दा अझै समस्या छ भन्ने महसुस भयो । लैङ्िगक बिषय उठाउन अझै चुनौती छ । न्यायिक समितिको संयोजक हुँदा पुरुषको मुद्दा आउदा चै अलि महिला उपाध्यक्षलाई नटेर्ने समस्या चै देखियो ।
यो अवधिमा के के गर्न सकिन जस्तो लाग्छ ?
पाँच बर्षको अबधी हुँदै गर्दा एउटा छुट्टै हिम्मत आएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको दायरामा रहेरै पनि थुपै काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने लाग्यो । यो अवधिमा थुपै काम गर्न सकिने मात्र होइन हिजो उप भएर काम गरेको अनुभव र अभ्यासले अब प्रमुख भएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लाग्यो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कर्मचारी बिच सहकार्य चै जरुरी छ त्यो भयो भने बिकास अनि निर्माणका प्रशस्त काम गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारीको सहयोग बिना त बित्तिय सुशासन देखि न्यायिक, बजेट बिनियोजन जतिपनी गाउँपालिकाले गर्ने काम छन् ती प्रभावित हुन्थे । कर्मचारिको सहयोगले नै त बित्तीय सुशासनमा जिल्लामा पहिलो हुन सकियो नि होइन र ? कर्माचारी प्रती कुनै गुनासो छैन । नियममा रहेर गर्ने काम गर्न सहयोग गर्नु भयो। गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा पनि हामी पहिलो भएका छौं । यो पहिलो हुनु नै कर्मचारीको सहयोग मान्नु पर्छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकिदै छ । तपाईंको तयारी के छ ?
यो पाँच बर्षको अवधिमा मेरो दक्षता बढेको छ । अब अध्यक्षमा अप्ग्रेट हुनुपर्छ । हिजो नयाँ थियौ स्थानिय तह नै नयाँ थियो । यी अवधिमा पालिकाको आवश्यकता के छ भन्ने महसुस भएको छ । यो पाँच बर्षको अवधिमा अध्यक्षले जति काम गर्नु भयो मैले त्यति नै गरेको छु त्यसकारण म अब अध्यक्षको लागि योग्य छु । ‘मसंँग अध्यक्ष हुने क्षमता छ तर महिला भएकै कारण चुनौतीपूर्ण पनि छ, कि पार्टीले नपत्याउलाकी भनेर’ तर अब मेरो तयारी भने अध्यक्षको नै हँुने छ ।